Ekugcineni, Ithonya ngegama elingukhiye | Martech Zone
Ekugcineni, Ithonya ngegama elingukhiye
ULwesibili, May 3, 2011 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Namuhla mBlast wethule inguqulo entsha, yamahhala yesixazululo sabo se-mPACT. I-mPACT yaklanywa kusuka phansi ukusiza abasebenzisi ukuthi bathole amazwi anethonya anomthelela emakethe yabo ngezinto abazisho kumabhulogi, izindatshana eziku-inthanethi, i-Twitter, i-Facebook nakwezinye izindawo eziku-inthanethi.
Ku-mBLAST, sikholelwa ukuthi ukuphela kwendlela yokukala umthelela wezwi ngokubheka izihloko namagama asemqoka izwi elibhala ngawo. Amathuluzi amaningi wokuhlonza ama-Influencer emakethe akuziba ngokuphelele lokhu, futhi anikeze izikolo ama-Influencer ajwayelekile kubantu ngaphandle kokucabanga ngalokho abakhuluma ngakho noma ukuthi banethonya kangakanani ezihlokweni imakethe ezikhathalelayo. Kungokuthola kuphela amazwi anethonya empeleni abhala ezihlokweni ezibalulekile kuzithameli zethu lapho singaqala khona ukusebenzisa lawa mazwi anethonya ukusiza ukufeza izinhloso zethu ezithile zokumaketha. UGary Lee, umphathi omkhulu
Angikwazanga ukuvumelana noGary ngaphezulu! Igunya nobuchwepheshe bunokulandelana okungaqali ngomuntu, kodwa ngesihloko. Izinhlelo eziningi kulezi zinsuku zilinganisa ithonya ezingeni lomuntu siqu kunezinga lezihloko - okwenza kube nzima ukuthola iziphathimandla zeqiniso. I-mBlast kubonakala sengathi ithinte kakhulu i-algorithm enkulu okufanele ibe wusizo kubakhangisi ukukhomba abaholi bezimboni.
Kusetshenziswa uhlelo olufana ne-mPACT Pro, inkampani yezobudlelwano bomphakathi noma i-ejensi yezokumaketha ingakhomba abazoba ngabathonya futhi ibasondele ukuthola amathuba aqondisiwe afanele izilaleli zabo. Isibonelo, ngingahle ngifise ukukhuthaza umcimbi - mane ngifake igama elingukhiye ohlelweni bese ngikhipha uhlu lwababhali, ama-blogger, kanye nezazi zemithombo yezokuxhumana abangathanda ufuna ukubhala ngomcimbi onje!
Sizobe sihlola uhlelo lwe-mBlast ngokuqhubekayo!
Idizayini Yesikhombimsebenzisi: Izifundo ezivela kukheshi lase-Indianapolis
May 4, 2011 ku-12: 56 PM
Lo ngumbono omuhle. Ngizoba nentshisekelo enkulu kulokho okutholayo. Kuzwakala sengathi ume ngempela ngemuva kwesisekelo salo mbono. Umi kanjani kuKlout njengoba sekunesikhashana? Uyayithanda noma uyayizonda?
May 4, 2011 ku-3: 10 PM
Bengihlala ngiwazisa njalo umkhombandlela uKlout awuthathayo embonini kodwa kungikhathaze kakhulu ukuthi bekungekho umongo emazingeni. Ngenxa yalokhu, ngikhonjwe njengezinye zezinkampani uKlout asebenze nazo ukukhiqiza 'ukubhuza'. Esinye sazo kwakuwumbukiso wethelevishini - empeleni bangithumelela ibhantshi nesixhumanisi sangokwezifiso ukuze ngibuke kuqala uhlelo. Inkinga ukuthi… Angiyibukeli i-TV ngaphandle kwama-documentary nezindaba. Ngakho-ke - ithonya kungenzeka ukuthi lalikhona, kepha hhayi ukubaluleka. I-mBlast ibonakala ibuyisela emuva indlela - engiyithanda kakhulu.